Islam chọrọ ime n'elu ke Sweden | Apg29
Islam chọrọ ime n'elu ke Sweden
E nwere a agha ime mmụọ maka mba anyị n'agbata Christianity na Islam.
E nwere ọtụtụ ndị Alakụba na-adịbeghị anya mba anyị họọrọ ndị Christian ụzọ, n'ebe ịkpọasị na ime ihe ike. Nke ahụ bụ nke oma n'akụkụ ihe, mgbe Islamist iyi egwu enwekwu.
Integration - a isi nke
Eduga ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-now na-ekwu banyere na mwekota bụ a oké mkpa nke. O doro anya na ọ pụrụ isi nnọọ ike kwuru.
O doro anya na ọ bụghị otú ahụ smart na-ejighị ya kpọrọ a oké mkpa nke. Gịnị ka anyị pụrụ ime banyere okwu a dị mkpa? The mwute azịza bụ "adịghị nnọọ" ma ọ bụ "ihe fọrọ nke nta ihe ọ bụla".
Ihe kpatara nke a, enweghị nchekwube ihe a ọkà mmụta sayensị, Prọfesọ Ruud Koopman kwubiri. O nwere ihe karịrị afọ 20 na-eme nnyocha na mwekota na assimilation n'etiti ndị Alakụba na Europe.
Na Norwegian akụkọ Document nwere ike na-agụ ihe ọ na-abịa na. Nkwubi okwu ya bụ: Islam-enye ohere na-adịghị ná mma na ochichi onye kwuo uche na Western ọha mmadụ. Ọ bụ doro anya na ike iwekota Alakụba karịa ndị ọzọ dị iche iche nke kwabatara na Western ọha mmadụ.
Ugbua na 2013 Koopman bipụtara a akụkọ na soro nnyocha e mere na-egosi na abụọ n'ụzọ atọ nke ndị e nyochara Alakụba kwere na iwu okpukpe dị mkpa karịa iwu nke mba ha bi na.
Ọ dịghị Western otu unen na tụnyere ndị Alakụba. N'ihi ya, ọ bụ ihe nro na Sweden ga-arụzu ihe ọ bụla ọzọ obodo unen.
Nke a bụ n'ihi na ọ bụ banyere ihe a dị iche iche omenala, okpukpe, na a mindset na esemokwu na Swedish mmadụ.
A ngwọta bụ, Otú ọ dị, na nke ahụ bụ mgbe ndị Alakụba ga-tọghata ndị Kraịst. E nwere ọtụtụ ihe atụ nke ndị emeela a nzọụkwụ, nke kacha mma jisiri iwekota n'ime otu.
N'agbanyeghị nke a, họrọ Migration Board ka chụpụ ọtụtụ n'ime ndị a Christian atọghata, mgbe nnukwu ọnụ ọgụgụ - ndị na-adịghị chọrọ iwekota - anọgide. Nke a pụrụ ịdị a na-agbawa obi ndudue!
Ọ bụrụ na ị na-eme ka aha ya mere na-agụ isiokwu a na-ahụ ihe atụ nke ihe na-eme na mba anyị.
Soheila Fors nwere a dị ịrịba ama FL utet, enye akamanade ke Iran na mgbe e mesịrị ka Sweden. Taa ọ bụ na-eguzosi ike Christian ma nwere ahụmahụ nke ma Islam nke Kraịst. Ke ibuotikọ ke The World Taa ọ na-agwa anyị banyere ihe omume:
"Ọ mere na square mgbe m nwere caucus o wee ebịne m. The ákwà nọ ọdụ n'ụzọ zuru okè, dị ka ịkpọ ọnụ ọchị. Ya mere malite mkparịta ụka ahụ na-abụghị a mkparịta ụka na-enweghị a na-anụ. Mgbe ọ na-adịghị na-na ebe ọ bụla, ọ bụ oge ka ize: Anyị abịawo ebe a iji weghara. Ọ dịghị onye kwesịrị-amụta Swedish, onye ọ bụla kwesịrị na-ekwu okwu Arabic. Mgbe anyị nwere ike, ga-amanye na-eyi ákwà.
The oku na-aga nyere a ọjọọ uto n'ọnụ m n'ihi na m zutere ọtụtụ dị ka ya ọtụtụ ugboro. Ọ bụ okpukpe ọchịchị aka ike ehi na mgbe nile na-ada otu ihe ahụ, ma n'afo 1980 Iran na 2020 si Sweden. "
Anyị ga-enye a dị iche iche na foto nke Sweden, ya bụ site Hjällbo, a esịt Gothenburg. World Today enye a na foto nke ihe mere mgbe atọ Kraịst ọkọkwọrọ na Square.
Mgbe ahụ, e nwere a Ihọd si òtù na-ekwu, sị: "I nwere atọ nkeji na-i si ebe a, ma ọ bụ m ga-agbapụ gị."
Ihe ahụ merenụ mere mgbe Ramadan na òtù, kwupụtara na "All ngwa ngwa ebe a. Anyị bụ ndị Alakụba. Anyị achọghị gị ebe a. "
Ndị na-esonụ na-kwuru okwu nke ndị Alakụba: "Anyị na-abịa ebe a iji weghara" na "Anyị achọghị gị ebe a."
Nke a na-egosi na e nwere a agha ime mmụọ maka mba anyị n'agbata Christianity na Islam. Ọ bụ ugbu a elu n'oge Kraịst na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eteta ma na-ihe ndị a kpọrọ ihe.
The Islamists na-aba ụba Sweden
Ọ dịghị onye kwesịrị iche na Sweden bụ a na-echebe n'akụkụ nke ụwa mmetụta nke Islamists. A SAPO akụkọ na-egosi na nkọ abawanye nke Islamists na Sweden.
On TV, teletext na ọtụtụ ndị ọzọ media ike ịbụ June 11 na-akụkụ nke FBI na egwu na ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke Islamists na Sweden.
Fredrik Hallström, osote onye isi nke counterterrorism ekwu, sị: "Anyị na-eche banyere uto." Ọ na-kwuru na akụkọ: "The ikike ugbu a na-aga na-akpasu ya iwe na-jikọrọ ọnụ ọgụgụ nke buu Islamists na Sweden ụba sharply na-adịbeghị anya, si narị ka puku. Na May, ugbua nwere isii a ma ama na Islamists e ejide gị. "
E nwere ugbu a ọtụtụ puku (!) Islamists na Sweden. Otu n'ime ndị a nwere ike sị mejupụtara a pụrụ iyi egwu na nche nke mba anyị. Ọ bụ eleghị anya naanị a okwu nke oge tupu anyị malite ịhụ buu Islamists na-eme ihe n'ụzọ ọ bụla.
Enweela a nkọ mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke ndị Alakụba na Sweden na-adịbeghị anya.
Ke Ruth nke a nwekwara ndị a nkọ na-abawanye na islam. The Islamists dị njikere ime ihe ọ bụla na aha nke nkwenkwe okpukpe ha, gụnyere ịfụ elu na ikuku na-egbu ndị ọzọ.
Na June, Nche Service chụpụ abụọ emi imams (!), Ònye nọ na-arụsi ọrụ ike na alakụba. Ndị ọzọ so buu Islamist gburugburu ebe obibi nwekwara e ejide site Nche Service.
The nkịtị Muslim anyị kwesịrị n'anya ma na-agbalị iji merie maka Jesus. Jesus 'ịhụnanya na-eme ka a Muslim na a na-ahụ n'anya na-eso ụzọ Jizọs kama nke ịghọ Islamists.
Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a na-Muslim unu mara na ị na-Chineke huru n'anya. Ya mere ime otu ihe ahụ dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na-emeghe ka ozi nke ịhụnanya.
Isiokwu na vidiyo na-mere site ndị ọzọ karịa Apg29 na-anọchi anya echiche nke onwe ha.